Tarsan “Xasan Sheekh ayaa faragelin toos ah ku sameeyay dhageysiga khudbadaha musharixiinta” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Tarsan “Xasan Sheekh ayaa faragelin toos ah ku sameeyay dhageysiga khudbadaha musharixiinta”
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna musharax haatan u taagan tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Tarsan ayaa ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh inuu faragelin ku sameeyay fadhigii baarlamaanka Soomaaliya ee shalay ay musharixiinta uga dhageysanayeen khudbadahooda.
Qoraal uu Tarsan soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xildhibaanada baarlamaanka ka dalbaday inaysan soo xaadirin fadhiga baarlamaanka ee dhageysiga musharixiinta.
Inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maalintii shalay kasoo qeyb-galay dhageysiga khudbadaha musharixiinta madaxweyne ayaa xilliga duhurkii kadib isaga tagay goobtaasi, taas oo keentay in musharixiinta qaarkood ay si weyn uga caroodaan.
HSM oo faragelin toos ah ku sameyey dhegeysiga soo jeedinta musharaxiinta oo xildhibaano ka dalbey in ayna xaadirin fadhiga barlamaanka
— Mohamud Nur (Tarsan) (@MohamudTarsan) February 5, 2017
Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa dhowr jeer hore xildhibaanada baarlamaanka ugu baaqay inay si siman u dhageystaan khudbadaha musharixiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo maalintii shalay aanay dhicin.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta berri oo ay tahay Arbaco ayaa la filayaa in tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ka dhacdo xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho, iyadoona ammaanka magaalada si weyn loo adkeeyay.